Red Velvet - Irene Myanmar Fanbase - Download Facebook Videos - GenFK.com
Red Velvet - Irene Myanmar Fanbase
Fanpage of Myanmar reveluvs dedicated for Red Velvet Leader Irene-배주현. We will share all about Irene's fact and activities with our best^^ � Boo ya! �
FB URL: https://www.facebook.com/irenemyanmar/
[CUT/TRAN] 180220 #IRENE &SEULGI @Hello Counselor 🐰:အခုရက်​ပိုင်း သူအမြဲလိုလို နား​ထောင်​ဖြစ်​​နေတဲ့ favorite songက Chunghaရဲ့ Roller Coasterပါတဲ့😍 🐻:Unnieက အဲ့သီချင်းကြည့်​ပဲ ခနခန နား​ထောင်​နေတာ​ ကား​ပေါ်မှာလဲ အဲ့သီချင်းကိုပဲ လိုက်​​ဆို​နေတာ😂ဆိုတာမှ တ​နေကုန်​ ဒီသီချင်းတစ်​ပုဒ်​ထဲကိုပဲ အားတိုင်း ​အော်​ဆို​နေတာ 🐻:Unnieက စိတ်​တည်​ငြိမ်​တယ်​ ​နောက်​ပြီး အရမ်းလဲ ဂရုစိုက်​တယ်​😍 🐰🐻:သူတို့၂​ယောက်​လုံးက တည်​ငြိမ်​တယ်​ဆို​ပေမဲ့ တကယ်​တမ်း​ သူတို့ဘာသူတို့ပဲ ​နေတဲ့အချိန်​​တွေဆိုရင်​ တကယ့်​ က​လေး​လေး​တွေလိုပဲ ပြုမူ​နေထိုင်​တတ်​တယ်​တဲ့(LMAO တည်​ငြိမ်​သူကြီး​တွေ😂🔫) ဒါ​လေးက KHJက ဖြတ်​​ပေးထားတဲ့ Seulrene cut​လေးပါ​နော်​😉 👉:https://twitter.com/Red_Velvet_KHJ/status/965620722163892224 🐰🐻
Joy🐣:ငါက unnieရဲ့ ချစ်​ဖို့​ကောင်းတဲ့ ညီမ​လေးမလား😋*​ဘောလုံးလု​ပြေး😂 Wendy🐹:ငါက နင့်​ရဲ့သူငယ်​ချင်းမလား😋*​ဘောလုံးလု​ပြေး Seulgi🐻:​အော အိုး 😦😧 Irene🐰 Arjumaရယ်​သံဖြင့်​ (ဟား ဟား ဟား😂) တကယ့်​မနိုင်စိန်ြ​​ကီး​ပေါကြီး​တွေပါဆို😂😂😂 🐰🐻
[HD]180202 Red Velvet Comeback Stage😍 HDဖိကြည့်ပါ ၅ယောက်လုံး outfit ခပ်လန်းလန်းတွေနဲ့Hotလွန်း😭 Link> https://youtu.be/crBXov-HEDk #YYZ🐰
180201 Irene at MCD fancam [HD] who dat who dat who dat boy🙈🙆‍♀️😱 Wuri ommaရဲ့Who dat who dat who dat boyကိုမကြွေတဲ့Luvieတွေရှိရဲ့လား😸😻adminတော့အဲ့အပိုင်းလေးကိုသိပ်ကြွေတာဘဲ😁 ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်😭အသက်ရှူတောင်မှားတယ် Link>https://youtu.be/kk-df47vt-c #YYZ🐰
180115 #Twice #RedVelvet #Nayeon #Irene #Likey
Kang Seulgiနဲ့ Bae Joohyunတို့2​ယောက်​ ​ဆော့​နေ​သော Gameကစားနည်းကို သိသူ​ဖြေပါ😝😂(၁၀၀မှတ်​💯) 🐰🐻
[UPDATE] 180115 @RedvelvetSMtown iG Update with #YermSeulRene Aigoo Cutie Babies🐰🐻🐢😭😍😍😍 https://www.instagram.com/p/Bd-Z2uwHNPt/ 🐰🐻
[FANTAKEN] 180115 #IRENE&SEULGI @ISAC Seulrene isn'taship🚢They are helicopter 🚁😂 From now on they are helicopter couple🚁🚁Confirm that.😂 🐰🐻
[VID/CUT] 180109 Level Up project2Ep2 ဒို့ Ramyeon Duoက​တော့ Yorisaအက​လွန်​သွားတာ ဆံပင်​​မွှေး​တွေမီး​လောင်​​တော့မလို့😂 🐰:Lvl up Season1နဲ့ Season2မှာ ​ပြောင်းလဲသွားတာက​တော့ Seulgi's Bangsပါတဲ့😍Seulgiက bangs​လေးနဲ့ ချစ်​ဖို့​ကောင်းတယ်​တဲ့😂😍 🐻:ချစ်​ဖို့​ကောင်းချင်​လို့ bangsညှပ်​တာမဟုတ်​ပါဘူး chic styleဖြစ်​ချင်​လို့ပါ😐 🐰: ဒါမဲ့ တကယ်​ချစ်​ဖို့​ကောင်းတယ်​😍 အ​ဂေါက်​coupleက​တော့ လှလို့ချစ်​တာမဟုတ်​ ချစ်​လို့လှတာပါ ဆိုတာထက်​ ပိုဆိုး​နေတယ်​😂 http://www.oksusu.com/v/DSmsE 🐰🐻
ကြုံရင်​လည်း ကြုံသလို ​ပေါတယ်​ မကြုံရင်​လည်း မကြုံသလို ​ပေါတယ်​ Yay!ဒါမှ ဒို့အကြီး2​ကောင်​☺😂✌✌ 🐰🐻
​အောင်​မြင်​​သော Great Dancer​ကောင်း 2​ယောက်​ဖြစ်​ချင်​ပါသလား မီးဖို​ချောင်​ထဲမှာ ဆင်​အကလိုလို ကြံ့အကလိုလို လူနားလည်​ရခက်​​သော အကများကိုသာ ကလိုက်​ပါ သင်​တ​နေ့ မုချ ​အောင်​မြင်​လာပါလိမ့်​မည်​ ပုံ/📝 အတူး ဟင်းချက်​ရင်း ကခြင်းဖြင့်​ SM Audition​အောင်​မြင်​လာခဲ့သူ , SM's ဒိတ်​ဒိတ်​ကျဲ ဒန်​ဆာ ဖျဲသီးနဲ့ နာနတ်​သီးတို့ ကြီး​ပေါကြီး 2​ယောက်​🍉🍍😎😎 http://share.vyrl.com/ko/p/5a4f3262462473d7118b45c0 🐰🐻
#RedVelvet #LevelUpProject #Season2 #Teaser
171229 #Irene #Peekaboo
171229 #Irene #KBS #Gayo #Daechukje
hey luvies! ကြားပီးပီလား??? Irene က 91 born ဆိုတာ sm ကမှားကြေညာထားတာတဲ့😇 မနေ့ကမှအမှန်ကိုပြန်ကြေညာသွားတာ တကယ်တော့ Irene က 01 born ပါ😈 မယုံရင်အောက်မှာကြည့်သွားကြ😌 အမတွေကိုကပ်ချွဲနေတဲ့ maknae လေးကို😘 💖no more omma💖 💖from omma to baby💖 #Ireneluv
[Fancam/NYC] 171231 - 180101 #REDVELVET #NewYearCountdown Happy New Year Luvies 🎊🎉💥💝 အချစ်ဆုံး ၅ယောက်ရဲ့ NYC Fancam လေးပါ 😍😍 Via WNC - https://youtu.be/n_fV8eul4aA #KMT
Stylist က Hair Pin ဖြုတ်​မ​ပေးလိုက်​လို့ hair pin တပ်​ရက်​​သားကြီး စင်​​ပေါ်တက်​သွားတာ😂😂... Kwang Soo ကမ​နေနိုင်​လို့ ​လှမ်းပြောရှာတယ်​ အဲ့​တော့မှ သိပြီး ပြန်​ဖြုတ်​တာ...လွဲရတယ်​ Bae JooHyunရယ်​😂... Photo - ⬇cmt
151230 #Irene #KBS #Gayo #Daechukje
[OFFICIAL] 171228 #IRENE 'Hyundai Motors' Album Event ဒီ Hyundai Auto Advantage Program နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Ireneရဲ့ ဗီဒီယိုကို ရှဲခဲမယ်ဆိုရင် Sign ထိုးထားတဲ့ CDနဲ့ ကော်ဖီ လက်ဆောင်တွေအတွက် လက်မှတ်ကိုရရှိပါမယ် 😍 Wuri judyလေးကမျက်မှန်လေးနဲ့😙ချစ်ဖို့ကောင်းချက် ([#EVENT] #레드벨벳 #아이린 이 소개하는 현대자동차 어드밴티지 프로그램! 세젤예 아이린 영상을 공유하면 추첨을 통해 싸인 CD와 커피 기프티콘을 드립니다🎉 🎉 #차종교환 #신차교환 #안심할부! 자동차만큼은 걱정말고 타세요📢 #현대자동차 #어드밴티지프로그램) #YYZ🐰